mairie-antananarivo – Taxi-ville
auteur 10 novambra 2017 Commentaires fermés
Nitsangana androany zoma 10 novambra 2017 ny Vondron’ny Taxi Matianina na VTM eto Antananarivo Renivohitra, hita izany nandritra ny valan-dresaka natao tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny « Mon gouter » Andrefana Ambohijanahary izay notarihan’ny Filoha vonjimaika Andrianaharisoa Haingo Janneot.
Nambarany tamin’izany fa tsy miombon-kevitra amin’ny ny FTAR izay manohitra ny tetik’asa fanatsaràna ataon’ny CUA izy ireo fa vonona kosa hiaraka hampandroso sy hanantsara ny kalitao ny taxi ville izay fiaraha-miasa miaraka amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Araka izany dia mankasitra tanteraka ny OMAVET ny VTM satria tsy manana tetik’asa haka volabe amin’ny taxi izy fa fanatsarana ny fitaterana sy hampiakatra ny kalitaon’ny asa fitanterana ary tsy hanilika ny taxi velively. Nanaiky ny hampiasa ny fitondrana Laterne vaovao. Amin’ny Herinandro ambony izao ny fivoriambe ataon’ny VTM.
AO ANATY » Fifamoivoizana, Serasera